MAHAFASA FARAFANGANA : Nidina ifotony nitondra fanampiana ny Praiminisitra Ntsay Christian
Taorian’ny fahamaizana goavana nampitondra faisana ny mponina tao amin’ny Distrikan’i Farafangana, dia efa tonga any an-toerana mitondra fanampiana ireo mpitondra Fanjakana ambony notarihin’ny Lehiben’ny governemanta, ny fiandohan’ny herinandro teo. 18 octobre 2021
Tsy niandry ela fa nidina ifotony, nanatitra fanampiana maro ny Praiminisitra Christian Ntsay sy ny Minisitry ny Mponina Soafilira Princia, izay nisolo tena ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina. Tokantrano manodidina ny 882 isa no fantatra fa nitsinjarana izany ka nisitraka ireo fanampiana ireo. Vary 25 kg, paty 500 g, sira 1kg, savony 800 g, vilany N°40, zinga iray, siny iray, bodofotsy iray, zerikana 5litatra iray, tafo fanitso 10 takelakano notsinjaraina. Samy nahazo izany avokoa ireto tokantrano niharam-boina ireto.
Nanatanteraka ny ezaka araka izay tratra moa ny Fitondram-panjakana manoloana ny fahasahiranana manjo ireo mponina tra-boina ao amin’ny Fokontany Mahafasa Atsimo sy Andrefana, Distrikan’ i Farafangana.
Etsy an-kilany dia nankahery azy ireo mba hitraka, ka hanorina ny fiainana vaovao indray na dia mafy aza ny entina hiatrehana izany ireto mpitondra fanjakana. Taorian’ity loza nitranga ity ihany dia tena hita taratra ny fahavoazana mihatra amin’ireto tokantrano marobe, ao amin’ireo fokontany ireo. Noho izay toe-javatra izay indrindra dia nanamafy ny Praiminisitra Christian Ntsay nandritra ny fandalovany tany an-toerana fa hisy ny fanaovana asa tambazana vola na amin’ny alalan’ny "Argent Contre Travail”, izay tetikasa lehibe natao mba hanomezana asa ireo tra-boina ireo, izay hatomboka ato ho ato aorian’ny fandaminana rehetra. Hotanterahina miaraka amin’ny FID moa izy io, raha ny fanazavana ihany.
Manjavozavo ny niandohan’ny loza
Raha tsiahivina, ny zoma 08 oktobra, tokony ho tamin’ny 10 ora alina no nisy firehetana tao amin’ity Fokontany ity. Naharitra ora maro izany satria nanomboka ny zoma alina ary ny sabotsy 09 oktobra tamin’ny 04 ora maraina vao levona ny afo. Trano 700 isa tany ho any no kilan’ny afo nandritra izany. Olona iray ihany koa no nindaosin’ny fahafatesana, fitaovana sarobidy isan-karazany, toy ny fiara, vola ary kojakojan-tokantrano maro no levona tamin’izany. Ny fanadihadiana natao sy ny angom-baovao voaray farany tany an-toerana mahakasika ity tranga ity dia voalaza fa tsy mbola fantatra mazava ny fiandohan’ny firehetana hatreto. Misy ireo tra-boina sasantsasany no niahiahy fa toa fanahy iniana nataon’olon-tsy fantatra no nahatonga ny fahamaizana. Ny andro alina, nifofofofo ny rivotra nandritra izany ka tsy ela akory dia nahazo vahana ny fiparitahan’ny afo. Tsy mbola voaporofo akory anefa izay fahamarinan’ny ahiahin’izy ireo ary mbola ao anatin’ny famotorana lalina hatrany ireo mpitandro filaminana mandray an-tanana ny raharaha.
Miantso ireo malala-tanana hatrany
Manoloana ny voina izay hatrany dia tsy mitsahatra miantso ireo mpiray tanindrazana, olona tsara sitrapo sy izay malala-tanana ireto farany hanome izay voatsirambin’ny tanana, tsy terena fa an-tsitrapo. Mbola miady mafy ny ankabeazan’izy ireo amin’izao fotoana izao. Manome fisaorana sahady ireo izay efa nahavita ny adidiny sy mbola vonona hanampy azy ireo ny mponina, raha ny loharanom-baovao voaray hatrany.